Tag: facebook bhatani | Martech Zone
Tag: facebook bhatani
Chishanu, June 1, 2012 Svondo, Gunyana 8, 2013 Douglas Karr
Ndezvipi zvakanaka zvirimo zvako pasina kugonesa kugona kwekuti izvo zvemukati kugovaniswa? Ini ndinogara ndichishamisika pandinoverenga peji rinoshamisa uye panogona kunge pasina mabhatani ekugovana kana rinoshanda zvisirizvo. Kana ini ndikabaya bhatani rekugovana uye zita uye rondedzero hazviuye, ini ndinowanzo kubatikana kuti ndigadzirise uye ndisundire kunze uko. Ini ndinongo bheyera… mamwe maverengi akarasika! Ini handina yega yekugovana bhatani pane yedu